नेप्फ्युन लमजुड फिल्ड कार्यलयद्धारा ३ दिने बचत तथा ऋण ब्यवस्थापन तालिम प्रदान ||
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ फिल्ड कार्यलय लमजुडको आयोजनामा बेशीसहरमा ३ दिने बचत तथा ऋण ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ
लमजुङमा दिए एक हजार ४३ जनाले उम्मेदवारी (कहाँ कतिले दिए उम्मेदवारी हेर्नुहोस )
रेडियो मस्याङदीका सचिव घले अमेरिकामा सम्मनित
लमजुङको अग्रणी सञ्चार संस्था सामुदायिक रेडियो मस्याडदीका सचिव प्रेमकुमारी घले अमेरिकामा सम्मानित हुनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सघंको स्थायी फोरमको १६ औं बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुग्नुभएका घलेलाई अमेरिकाको
मिसेस लमजुङको उपाधी शोभालाई, मिस लमजुङ बनिन् शर्मिला
मिसेस लमजुङको उपाधी शोभा ठकुरीले हात पार्न सफल भएकी छन् भने शर्मिला परियार मिस लमजुङ बन्न सफल भएकी छन् । बेसीशहरमा शनिबार भएको फाइनल उपाधी प्रतियोगीतामा दस जनाको समूहलाई पछि पार्दै
बन्दुक बनाउँदै गर्दा लमजुङमा २ युवा पक्राउ
निरज अधिकारी २५ बैशाख, बेसीशहर । स्थानिय तहको निर्बाचनको
माघ ७ भित्र तिन तहको निर्वाचन गर्न नसकिए देश ठूलो संकटमा फस्छ : देउवा
निरज अधिकारी २८ बैशाख, सुन्दरबजार नेपाली काग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवाले आगामी माघ ७ भित्र तिन तहको निर्वाचन गर्न नसकिए देश ठुलो
कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरे एक लाख जरिवाना : आयुक्त पौडेल
२८ बैशाख, बेसीशहर । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले स्थानिय तह निर्बाचनका बेला कोही कसैलै आचारसंहिता उल्लघंन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने चेतावनी
३४ लाखमा देलेग डोदेन थायेलिङ गुम्बा निर्माण
२८ बैशाख, बेसीशहर । जिल्लाको सदरमुकाम बेसीशहरमा देलेग थायेलिङ गुम्बाको निर्माण गरिएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङ बेसीशहर एकाइको नेतृत्वमा ३४ लाख रुपैँयाको लागतमा सो
निरज अधिकारी ५ बैशाख, बेसीशहर । लमजुङको क्होलासोँथर गाउँपालिका प्रमुखमा एमालेका प्रेम घले विजयी हुनुभएको छ । घले १२४४ मत अन्तरले विजयी बन्नुभएको हो । घलेले ३ हजार १४४
राईनास नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका थापा बिजयी
निरज अधिकारी ६ जेठ, बेसीशहर । लमजुङको राईनास नगरपालिकामा एमालेका सिंहबहादुर थापा मेयर पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्दी
नेत्रहिनको पक्षमा पर्याप्त कानुनको आवश्यकता छ : सांसद घले
निरज अधिकारी ६ जेठ, बेसीशहर । व्यवस्थापीका संसदका सांसद जमिन्द्रमान घलेले नेत्रहिनको पक्षमा पर्याप्त कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको
उत्कृष्ट होमस्टे काउलेपानीका घर वातावरणमैत्री प्रमाणिकरण
८ जेठ, लमजुङ । नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टे लमजुङ काउलेपानी गाउँका सम्पूर्ण घरहरुलाई वातावरणमैत्री घर प्रमाणिकरण गरिएको छ । बेसीशहर नगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयर तथा उपमेयरले सोमबार
शाशक नभई सेवकको रुपमा काम गर्छु : उपाध्यक्ष विक
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित होमबहादुर विश्वकर्माले मस्र्याङ्दी गाउँपालिकालाई नमूना, विकशित र सम्वृद्ध बनाउन आफु निश्वार्थ भावनाले काम गर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सोमबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । मध्यनेपाल नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित रमेश
चुनाव सकेर मनाङवासी यार्सा संकलनतिर
भत्ता नबढाएको भन्दै ‘अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द’
निरज अधिकारी २० असार, लमजुङ । जिल्लाको पूर्वी लमजुङ स्थित राईनासटार सिंचाई योजना पुर्ण रुपमा मर्मत थालिएको छ । विगत दस बर्षदेखी
निरज अधिकारी २० असार, लमजुङ । यहाँका तीन सय डकर्मीलाई सुरक्षित आवास निर्माण तालिम प्रदान गरिएको छ । गरिवी निवारण कोषको सहयोगमा जिल्लाका २४
भूकम्प पिडितलाई कोपाडेसको ‘सुरक्षित घर’
निरज अधिकारी २० असार, लमजुङ । भूकम्प पश्चात घरबार बिहिन बनेका यहाँको पूर्वी क्षेत्रका भूकम्प पिडिले नयाँ घर पाएका छन् । भूकम्पको
परियोजनाले फेरीदै भूकम्प पिडितको जीवनस्तर
निरज अधिकारी २३ असार, लमजुङ । भूकम्प प्रभावित समुदायको पुर्नस्थापनाका लागी सहयोग नामक परियोजना सञ्चालन भएसँगै यहाँको पूर्वी
लमजुङमा ट्राफिक नियम उल्लङघनका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि ट्राफिक चेकजाँचमा कडाई गरिएको छ । ट्राफिक चेकजाँचमा कडाई भएसँगै राजस्व दोब्बर बृद्धि भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका
विद्युत समस्यालाई लिएर इकाइद्धार विद्युत वितरण केन्द्रको ध्यानाकार्षण, १५ दिनभित्र समस्या समाधानको माग
विद्युतको समस्यालाई लिएर लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ बेसीशहर इकाइले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रको ध्यानाकार्षण गराएको छ । इकाईले एक विज्ञप्ती मार्फत दैनिक दर्जनौ पटक विद्युत ट्रिपिङका कारण उद्यमी
लमजुङका ८ वटा स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य शुरु, जनस्वास्थ्य मातहतका कर्मचारी खटाइएयो
लमजुङका ८ वटा स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अघि बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनालीको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको बैठकले
सहयोगी हातको पखाईमा छन् मेरुदण्डको समस्याबाट पिडित मनबहादुर
उपचार खर्चको अभावमा हिलेटक्सारका मनवबहादुर गुरुङको साहारा ह्यीलचेयर वनेको छ । दोर्दी गाँउपालिका वडा नंं. ४ का ३४ वर्षिय मनवहादुर मेरुदण्डको समस्याबाट पिडित छन् । उपचारका लागि धरै रकम चाहिने भएपछि अहिले उनि
शुसासनको अभावमा पुँजीगत खर्चले गति लिएन : पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत
स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारको उपयोग गर्न प्रशासनिक संरचना चाडो निर्माण हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताउनुभएको छ । रेडियो मस्र्याङ्दीसँगको बिशेष कुराकानीमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनपछि
निरज अधिकारी ७ साउन, बेसीशहर । पर्यटकीय दृष्टिकोणले धैरै अगाडी रहेको लमजुङमा पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्न विभिन्न निति तथा योजनाहरु निर्माण
लमजुङमा जबरजस्ती करणी आरोपमा एक पक्राउ
६ साउन, दोर्दी । लमजुङ प्रहरीले जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । दोर्दी गाउँपालिका २ का ४६ बर्षीय सन्तबहादुर परियारलाई प्रहरीले पक्राउ
वनलसुन खोज्न लेकतिर जानेको भीड
निरज अधिकारी ७ साउन, लमजुङ । हिमालपारीको जिल्ला मनाङ र लमजुङका लेकहरुमा हिजोआज वनलसुन नामक जडिबुटी खोज्नेहरुको भीड लागेको छ । मनाङको चामे,
बेसीशहरको हाइस्कुल चोकका ३ वटा घरमा आगलागी, २० लाखको क्षति
लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरको हाइस्कुल चोकमा शनिबार १२ बजे आगलागी हुँदा तीनवटा घर ध्वस्त भएका छन् ।
मध्यरातमा बेसीशहरका तीन पसल जल्यो
लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरको हाइस्कुल चोकमा शनिबार राती १२ बजे आगलागी हुँदा तीनवटा घर ध्वस्त भएका छन् । आगलागीका कारण बेसीशहर नपा वडा नं ७ स्थित सुनचाँदी पसल, फलफुल तथा तरकारी पसल र एक
राप्रपा लमजुङले तीन बर्षदेखी घर भाँडा तिरेन, घरमुलीले लगाए ताला
९ साउन, बेसीशहर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लमजुङले सम्पर्क कार्यालय राख्दै आएको घरमा विगत तीन बर्षदेखी घरभाडा नर्तिदा घरमुली मर्कामा परेका छन् ।
मध्यमस्याङदी–तल्लो मस्याङदी डबल सर्किटको काम ९० प्रतिशत पूरा
१२ साउन, बेसीशहर । लमजुङमा उत्पादित सबै विद्युतलाई लैजानको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा मध्यमस्र्याङ्दी देखी तल्लो मस्र्याङदीसम्मको
कविताबाटै सम्झिए हलोक्रान्तिका नायकलाई
लमजुङ । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नम्बर ४ बाटेगरामा आयोजना गरीएको एक कार्यक्रममा सहभागीले कविता मार्फत हलोक्रान्तिका नायकलाई सम्झीएका छन् । उनीहरुले हलोक्रान्ति विशेष कवितामार्फत
अलैची बेर्नामा लमजुङ आत्मनिर्भर, यसबर्ष झण्डै ३० लाख बिरुवा बिक्री
निरज अधिकारी ११ साउन, लमजुङ । अलैँचीको राम्रो संभावना बोकेको पहाडी जिल्ला लमजुङका उत्पादित अलैँची बेर्ना बिक्रीबाट यसबर्ष २ करोड ७० लाख
च्वाइस नेपालद्धारा भूकम्प पिडितका ५३ घर पुननिर्माणसँगै हस्तान्तरण
११ साउन, लमजुङ । गैरसरकारी संस्था मानवीय सेवा तथा अन्तर साँस्कृतिक आदानप्रदान केन्द्र च्वाइस नेपालले लमजुङमा भूकम्पबाट भत्किएका पीडितको आवासका लागि ५३ घर निर्माण गरेको छ
पुल भाँचिएर यात्रुबाहक बस दुर्घटना, दुई को मृत्यु, एक बेपत्ता (अपडेट)
१२ साउन, बेसीशहर । पोखराबाट लमजुङको रामबजार आउँदै गरेको ना ५ ख ६३९५ नम्बरको यात्रुबहाक बस रुदीखोला माथिको पुल भाँचिदा दुर्घटना भएको छ । लमजुङ र कास्कीका सिमानामा
१२ साउन, बेसीशहर । पोखराबाट लमजुङको रामबजार आउँदै गरेको ना ५ ख ६३९५ नम्बरको यात्रुबहाक बस रुदीखोला माथिको पुल भाँचिदा दुर्घटना भएको छ । लमजुङ र कास्कीका सिमानामा रहेको रुदी खोला र मादी नदी दोभानमा बनाइएको
१२ साउन, बेसीशहर । पोखराबाट लमजुङको रामबजार आउँदै गरेको यात्रुबहाक बस रुदीखोला माथिको पुल भाँचिदा दुर्घटना भएको छ । लमजुङ र कास्कीको सिमानामा रहेको रुदी र मादी खोला दोभानमा
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यारतुङ पर्व
१३ साउन, मनाङ । हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन प्रबद्र्धनका लागी यारतुङ अर्थात घोडा कुदाउने पर्व शुरु भएको छ । मनाङमा बर्खायाममा बाली लगाइ सकेपछि बर्षेनी घोडा
सवारीसाधन नहुँदा स्थानीय तहमा समस्या
१५ साउन, बेसीशहर । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा सवारीसाधन नहुँदा दैनिक कामकाजमै समस्या उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरकारी अधिकारीले स्थानीयवासीको काममा सवारीसाधनको
विद्युतको समस्या तल्काल सल्टाउन उपभोत्ताको माग, २० एमभीएको ट्रान्सफर्मर नराख्दा समस्या
१६ साउन, बेसीशहर । जिल्लामा बढ्दो लोडसेडिङको समस्यालाई लिएर उपभोत्ताहरुले तत्काल विद्युतको समस्या सल्टाउन माग गरेका छन् । विद्युत् उत्पादन हुने जिल्लाका रुपमा परिचित लमजुङमा पछिल्लो
मतदाता नामावली संकलनको टोली गाउँ गाउँमा
१६ साउन, बेसीशहर । लमजुङमा मतदाता नामावली संकलनका लागि संकलकको टोलि प्रत्येक नगर र गाउँपालिकामा पुगेका छन् । ४ नगरपालिका र ४ गाउपालिका रहेको जिल्लाका सबै तहमा आवश्यक उपकरण सहितको
बसन्त भट्ट १८ साउन, लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङमा घरजग्गा कारोबार बढेसँगै राजश्वमा समेत बृद्धि भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरु
नमुना होमस्टे काउलेपानीमा ५ बर्षमा पुगे ६० हजार पर्यटक
निरज अधिकारी १९ साउन, लमजुङ । नेपालकै नमुना होमस्टेको रुपमा परिचित लमजुङको काउँलेपानीमा ५ वर्षको अवधिमा ६० हजार भन्दा वढी पर्यटक
धमाधम उठ्न थाले भूकम्पले ढलेका घर
२३ साउन, लमजुङ । भूकम्प गएको झण्डै साढे दुई बर्षपछि यहाँका भूकम्पपिडितहरु भत्किएका घर ठडाउन तर्फ लागीपरेका छन् । पुर्ननिर्माण प्राधिकरण मार्फत जिल्ला समन्वय समितिले लाभग्राही
लमजुङका विद्यालयमा ‘स्कुल बैंक’ कार्यक्रम
२४ साउन, लमजुङ । यहाँका दस विद्यालयमा ‘स्कुल बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न तथा बचत गर्ने बानीको विकास गराउन ‘स्कुल बैंक’
दुराडाँडामा एकिकृत कृषिबस्ति बसाइदै, इरायली राजदूत मायरले गरे अवलोकन
निरज अधिकारी २४ साउन, लमजुङ । इजरायलमा आधुनिक कृषिको प्रशिक्षण तथा काम गरि फर्केका युवाहरुले लमजुङको दुरडाँडामा एकिकृत आधुनिक कृषिबस्ति बसाउन सुरु गरेका छन् ।
एक बर्ष अगावै बन्यो मोङ्ग्री सिंचाई योजना, घनपोखराबासी हर्षित
निरज अधिकारी २६ साउन, लमजुङ । यहाँका एक सिंचाई योजना तोकिएको मिति भन्दा अगावै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थित मोङ्ग्री
२६ साउन, लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङमा गाईभैसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता वितरण शुरु गरिएको छ । जिल्लाका ५० वटा गाई भैंसीले सुत्केरी भत्ता पाएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लमजुङले
बाढीपीडितलाई सहयोग जुटाउँदै नेविसंघ लमजुङ
बेसीशहर, साउन ३० गते । बाढी पीडितहरुको सहयोगका लागि नेबिसंघ लमजुङले आर्थिक सहयोग संकलन अभियान शुरु गरेको छ । नेबिसंघ लमजुङका नेता दीपक अधिकारीको संयोजनमा भएको अभियानले सोमबारनै ४८
जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा मुटुरोग विशेषज्ञबाट सेवा सुरु
बसन्त भट्ट १ भदौ, बेसीशहर । लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालले मुटुरोग सम्वन्धी विशेषद्धारा सेवा सुरु गरेको छ । अस्पतालको नियमीत सेवालाई प्रभावकारी वनाउन
भदौ १, मनाङ । हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको चामेमा गण्डकी बिकास बैँकको शाखा बिस्तार गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रबैँकबाट ‘ख’ बर्गको ईजाजत प्राप्त गण्डकी बिकास बैँकको ५१ औँ शाखा सञ्चालनमा
चण्डीस्थानका स्थानीयद्वारा अग्नीपीडितलाई आर्थिक सहयोग
१ भदौ, चण्डिस्थान । बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. ६ का स्थानीयले अग्नीपीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । स्थानीयले आर्थिक संकलन गरी बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. ७ का तीन जना अग्नीपीडितहरुका
८ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस : सुचनाको दायरा बढाउन सुझाव
भदौ २, बेसीशहर । शुक्रबार आठौँ राष्ट्रिय सूचना दिवस । लमजुङमा पनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुचना दिवस मनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयको आयोजनामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी दिवस
लमजुङका करदाता समक्ष अन्र्तक्रिया : पहिलो दिनमै २७ लाख आयकर संकलन
भदौ २, बेसीशहर । लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि शुक्रबार कर शिक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेश थापाको अध्यक्षतामा
आशा फाउण्डेसनद्धारा दुई शैक्षीक संस्थालाई यूरोगार्ड सहयोग
भदौ २, बेसीशहर । काठमान्डौमा रहेको जर्मनी संस्था आशा फाउण्डेसनको सहयोगमा लमजुङको दुई शैक्षीक संस्थामा ८ लाख बराबरको यूरोगार्ड प्रदान गरीएको छ । आशा फाउण्डेसनको सहयोगमा मस्र्याङदी
लमजुङबाट ३० लाख बढी आयकर संकलन
निरज अधिकारी- ३ भदौ, लमजुङ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले लमजुङका साना उद्योगी तथा व्यापारीहरुबाट ३० लाख रुपैँया भन्दा बढी आयकर संकलन गरेको छ । बार्षिक २० लाख रुपैँया
लमजुङमा ९ हजार ८२ मतदाता थप
निरज अधिकारी ४ भदौ, बेसीशहर । फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनका क्रममा लमजुङ जिल्लामा ९ हजार ८२ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । थपिएका मतदातामा ४ हजार ५६९
स्थानीय तहमा सञ्चालित शिविरमा लिए एक हजार बढीले नागरिकता
४ भदौ, बेसीशहर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ्गले नागरिकता वितरणका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहमा सञ्चालन गरेको शिविरमा एक हजार भन्दा वढिले नागरिकता लिएका छन् । प्रशासन
त्रिभुवन क्याम्पसमा निर्माणसम्पन्न सभाहलको उदघाटन, एकता तमु आमा समूहको भवन शिल्यान्यास
निरज अधिकारी - ४ भदौ, रुपाकोट । भानु नपा ११ रुपाकोटको त्रिभुवन क्याम्पसमा निर्माणसम्पन्न सभाहलको उदघाटन गरिएको छ । सांसद विकास कोषको १० लाख सहयोगमा निर्माणसम्पन्न
८ भदौ, बेसीशहर । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरू देवादि देव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्
‘राष्ट्रकै घातक पक्ष बनेको बालबिवाह जरैदेखी निराकरण गनुपर्छ’
८ भदौ, बेसीशहर । बालबिवाह समाज सँगै राष्ट्रको घातक पक्ष रहेकोले यसलाई जरैदेखी निराकरण गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । वालविवाह बिरुद्धको अभियानका सन्दर्भमा
पर्यटकसँगै बढ्यो एक्यापको आम्दानी
८ भाद्र, बेसीशहर । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मा पर्यटक आगमन वृद्धि भएपछि पर्यटक शुल्कबापतको आम्दानीसमेत बढेको छ । सन् १९५० जुन ३ तारिखका दिन सर्वप्रथम फ्रान्सका मोरिस
उद्योग वाणिज्य संघद्धारा नवआगन्तुक डिएस्पी विष्टको स्वागत, खरेलको विदाई
८ भाद्र, बेसीशहर । लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघले नवआगन्तुक प्रहरी नायव उपरिक्षक विष्टको स्वागत र सरुवा भई गएका खरेललाई विदाई गरेको छ । कार्यलयमै आयोजीत कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष थापाले
हरितालिका तीज आज समापन हुँदै, सप्तऋषिको पूजा गरिंदै
भाद्र १०, बेसीशहर । आज ऋषि पञ्चमी पर्व । हिन्दू महिलाहरुले आज सप्तऋषिको पूजा गरी हरितालिका तीजको ब्रत सम्पन्न गर्दैछन् । आजको दिन व्रतालु महिलाहरु बिहान नजिकैको नदी,
आमा समूहले गाउँबाट चलाएको बसको दैनिक १८ हजार कमाई
९ भाद्र। बेसीशहर । लमजुङ बेँसीशहर नगरपालिका–५ नाल्माका आमा समूहले नाचगानबाट संकलित रकमले गाउँमा बस चलाएका छन् । गाउँबाट सदरमुकाम आउन जानका लागि सकस भएसँगै आमा समूहले कोषमा संकलित
भूकम्पले घर भत्किँदा पुरिएर मनाङमा एक शिक्षकको मृत्यु
१० भाद्र, मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङमा भूकम्पले घर भत्किँदा पुरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । तल्लो मनाङको नासोङ गाउँपालिका वडा नं. ४, ओडारमा बस्दै आएकी ४९ बर्षीया पार्वती
अत्यधिक रक्सी सेवनले लमजुङमा एकको मृत्यु
१० भाद्र, बेसीशहर । अत्यधिक रक्सी सेवन गर्दा लमजुङमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । बेसीशहर नगरपालिका–२,तालफाँटमा एक पुरुष मृत अबस्थामा फेला परेका हुन् । शनिबार दिउँसो तालफाटस्थित
अलैची जोन कार्यक्षेत्र छनौट शुरु, सुपर जोन क्षेत्र बनाउन सकिने दावी
११ भाद्र, बेसीशहर । अलैची जोन कार्यक्षेत्र छनौट बारे सरोकारवालाहरुबीच आइतबार सदरमुकाम बेशीशहरमा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । कृषि विकाश मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि
लमजुङका पाँचवटा बस्ती स्थानान्तरण गर्न परिपत्र
१२ भाद्र, बेसीशहर । पहिरोको जोखिम अध्ययनपछि लमजुङका चार गाउँपालिकाका पाँचवटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय आयोजना
हरेक तहमा प्रहरी विट तैनाथ गर्छु : प्रनाउ विष्ट
१२ भाद्र, बेसीशहर । जिल्लामा क्रियाशिल सञ्चारकर्मी र नवआगन्तुक प्रहरी प्रमुख विच परिचयात्मक छलफल कार्यक्रम गरिएको छ । भ्रखरमात्र जिल्ला आउनुभएका प्रहरी नायव उपरिक्षक पदम बहादुर
लमजुङमा होटल व्यवसाय फस्टाउँदै, व्यवसायमा डेढ लाख देखी ६ करोडसम्म लगानी
वसन्त भट्ट १२ भाद्र, बेसीशहर । पछिल्लो समय लमजुङमा होटल व्यवसाय फस्टाउदै गएको छ । व्यवसायमा फाइदा देखेपछि जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रमा समेत
लमजुङमा गोलासाई जातको अलैंची टिप्न शुरु
१४ भाद्र, ताराचोक । लमजुङमा गोलासाई जातको अलैची हार्बेस्टीङ (टिप्ने काम) शुरु भएको छ । अलैची व्यवसायी महासंघ लमजुङ शाखाको उपस्थितिमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ७ ताराचोकको शेराका
कारागारमा घुम्ती पुस्तकालय सेवा
१४ भाद्र, बेसीशहर । दशौं पुस्तकालय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा लमजुङ स्थित जिल्ला कारागार लमजुङमा घुम्ती पुस्तकालय सेवा शुरु भएको छ । ‘लाईब्रेरीज पावरीङ डेभलपमेन्ट’ शिर्षकमा संसारभरका
भदौ १५ गते । दशौं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा सदरमुकाम बेसीसहरमा जिल्लाका सरोकारावालाहरुको विचमा पुस्तक चर्चा गरिएको छ । राजनीतिज्ञ, गाउँ तथा नगरमा निवार्चित
भूसंरक्षण कार्यालयद्धारा किसानहरुलाई साँढे २ लाख विरुवा निशुल्क वितरण
१५ भाद्र, बेसीशहर । जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय लमजुङ्गले जिल्ला भरका किसानहरुलाई निशुल्क विरुवा वितरण गरेको छ । कार्यालयले भूसंरक्षण पर्यावरण सन्तुलन गर्नका लागि
दोस्रो बेसीशहर महोत्सव हुने
१५ भाद्र, बेसीशहर । बेसीशहरमा दोस्रो बेसीशहर महोत्सव हुने भएको छ । लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ बेसीशहर इकाईको आयोजनामा आगामी माघ अन्तिम साता वा फागुन पहिलो साता महोत्सव गर्ने तयारी भएको
दोस्रो चरणमा चल्यो बहिनी शिक्षाका लागी दिदि कार्यक्रम
१५ भाद्र, बेसीशहर । बहिनी शिक्षाका लागी दिदी कार्यक्रमको दोस्रो परीयोजना शुरु भएको छ । सन् २०१७ अप्रिल १ बाट दोस्रो चरणको परीयोजना शुरु भएको हो । ग्लोबल एक्सन नेपाल ईकाई कार्यलय
समृद्धीको बिकल्प अब कृषि क्रान्तिमार्फत आर्थिक क्रान्ति : राज्यमन्त्री प्रसाई
-निरज अधिकारी १७ भाद्र, सुन्दरबजार । समृद्ध नेपालका लागी अबको बिकल्प कृषि क्रान्तिमार्फत आर्थिक क्रान्ति रहेको कृषि राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईले बताउनुभएको छ । लमजुङ
अग्रज पत्रकार दनाईलाई मातृशोक
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्दीय सभासद (पार्षद्) एवं लमजुङ आवाज साप्ताहिकका प्रकाशकरसम्पादक मिलन शर्मा दनाइलाई मातृशोक परेको छ । उहाँको आमा चेतकुमारी दनाईको शनिबार दिउँसो ७० बर्षको
मुस्लिम समुदायको इद पर्व शुरु, आज सार्वजनीक बिदा
मुस्लिम समुदायले इद पर्व मनाउन शुरु गरेका छन् । शनिबारदेखि ३ दिनसम्म मनाइने इदलाई इद उ जोहा अर्थात ईल उद अधा पनि भन्ने गरिएको छ । विश्वभरिका मुसलमान समुदायले हिजारी सम्वत् अनुसार यो बकर
बेसीशहर–चामे सडक थप जोखिम, अर्खलेमा चट्टान सहितको पहिरो
१८ भाद्र, बेसीशहर । सडकमा चट्टान सहितको पहिरो झरेपछि लमजुङ–मनाङ यातायात अवरुद्ध भएको छ । मस्र्याङदी गाउँपालिका वडा नम्वर ३ खुदीको अर्खलेमा पहिरो झरेको हो । आइतबार
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई शेयर धितोपत्र खरिद विक्रीबारे अभिमुखीकरण
२० भाद्र, लमजुङ । लमजुङका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई शेयर धितोपत्र खरिद विक्रीबारे अभिमुखीकरण गराइएको छ । जिल्लामा रहेको एकमात्र शेयर बिक्री कारोबार संस्था सुन्धरा सेक्यूरिटी लिमिटेडले
२० भाद्र, बेसीशहर । गत शनिबार राती गएको पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको बेसीसहर चामे सडकखण्ड तीन दिन बितिसक्दा पनि खुल्न सकेको छैन । सडकखण्ड अन्तर्गत मर्स्यांदी गाउँपालिका वडा नं ३
मोडेल हस्पिटलले शुरु गर्यो हाडजोर्नी विशेषज्ञबाट सेवा, अन्य थप सेवा विस्तार गर्दै
२० भाद्र, बेसीशहर । लमजुङ मोडल हस्पिटल प्रा. लीले हाडजोर्नी तथा नसारोग सम्वन्धी विशेषज्ञद्धारा सेवा सुरु गरेको छ । हाडजोर्नी तथा नसारोगका विरामीहरुलाई मध्यनजर गर्दै यस अघि मासिक रुपमा
ग्रामिण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बैंक भन्दा सहकारी संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण : ढकाल
जनकल्याण साकोसको २ करोड ३ लाख मुनाफा ३० भाद्र, बेसीशहर । नेफस्कूनका केन्द्रिय महासचिव चन्द्र प्रसाद ढकालले ग्रामिण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बैंक भन्दा सहकारी
यस वर्ष मनाङमा स्याउ उत्पादन दश प्रतिशतले वृद्धि
निरज अधिकारी- ३१ भाद्र, बेसीशहर । हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा स्याउको उत्पादन यस वर्ष बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्याउ उत्पादन दश प्रतिशतले वृद्धि भएको जिल्ला
विमानस्थल प्रयोगमा नआउँदा १७ करोडको लगानी अलपत्र
निरज अधिकारी- ३१ भाद्र, बेसीशहर । १७ करोड लगानीमा पुन निर्माण भएको यहाँको एकमात्र विमानस्थल अलपत्र अवस्थामा छ । मनाङमा रहेको हुम्दे विमानस्थलमा विगत ५ बर्षदेखी कुनैपनि
बेसीशहर । लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा पछिल्लो समय होटल व्यवसायमा लगानी र सुविधा थपिनेक्रम बढेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिने क्रमसँगै नयाँ होटल खुल्ने र पुरानाले सुविधा
लमजुङमा अब सबै स्वास्थ्य सेवा स्थानिय तहबाटै, गरियो हस्तान्तरण
बेसीशहर । लमजुङमा संचालनमा रहेका सरकार मातहातको सवै स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको छ । ४ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउ“पालिकामा रहेका स्वास्थ्य
चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तिव्र, सुन्दरबजारका अधिकांश पसल व्यवसाय मापदण्ड विपरित
४ असोज, सुन्दरबजार । नजिकिदैँ गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै लमजुङमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिईएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले बुधबार लमजुङको दोश्रो मुख्य व्यापारिक केन्द्रको
फरार अभियुक्त ४० वर्षपछि प्रहरी फन्दामा
४ असोज, बेसीशहर । लमजुङ प्रहरीले ४० वर्षदेखि फरार एक अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । पूर्वी लमजुङको राईनास नगरपालिका (साविक राईनास मोहोरियाकोट–४) का रेपबहादुर थापालाई प्रहरीले
मनाङमा २ शिक्षा अधिकारी, सरुवापत्र नपठाई विभागबाट अर्को जिशिअ खटाइयो
हिमाली जिल्ला मनाङको जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा दुईजना शिक्षा अधिकारीले काम गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले रमाकान्त शर्माको सरुवापत्र नपठाई विभागबाट टुकराज अधिकारीलाई खटाएपछि दुवै
आजदेखि दसैँ सुरु, आज घटस्थापना घरघरमा जमरा राखिदै
बिहीबारदेखि बडादसैँ सुरु भएको छ । घरघरमा शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी मानिने दुर्गाको आह्वान गरी घटस्थापना गरिँदैछ । आज बिहानै नजिकको नदी वा चोखो ठाउँबाट बालुवा वा माटो
मिदिम (करापु) हाइड्रोपावरले तिहार लगतै परिक्षण उत्पादन थाल्ने
प्रशारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा निरज अधिकारी ७ असोज, करापु । लमजुङको मिदिम खोलामा निर्माण भएको मिदिमखोला (करापु) जलविद्युत आयोजनाले तिहार
ऐतिहासिक इशानेश्वर महादेव मन्दिर पुननिर्माण गरिदै
निरज अधिकारी ७ असोज, करापुटार । काठमान्डौको पशुपतिनाथ पछिको महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रुपमा परिचित लमजुङको ऐतिहासिक इशानेश्वर महादेव मन्दिरको पुननिर्माण थालिएको छ ।
घाम्राङका यूवाहरुको कृषि मोह, विदेशबाट फर्किएर गाउँमै व्यवसायीक तरकारी खेती
७ असोज, घाम्राङ । यहाँको क्होलासोंथर गापा – ८ घाम्राङमाका युवाहरु यति बेला व्यवसायिक तरकारी खेतीमा व्यस्त छन । यहाँका ११ जना युवाहरु मिलेर किसान जागरण कृषक समुह गठन गरिएको छ । घाम्राङका जाँगरिला
दशैँको अवसर : कारागारबाट एक बन्दी रिहा
दशैँको अवसरमा लमजुङ जिल्ला कारागारबाट १ जना बन्दीलाई रिहा गरिएको छ । बेसीशहर नपा ६ सहजी निवासी लक्षु भन्ने लक्ष्मण घलेलाई सोमबार रिहा गरिएको हो । निजमाथी सवारी ज्यान र जबरजस्ती
आज महानवमी पर्व दुर्गा भवानीको पूजा आजा गरी मनाइँदै
१३ असोज, बेसीशहर । आश्विन शुक्ल नवमीका दिनमा मनाइने महानवमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ दुर्गा भवानीको पूजा आजा गरी मनाइँदैछ । आज महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजा
वरिष्ठ लोक गायिका विमाकुमारीलाई राइनासमा भव्य सम्मान
१३ असोज, राईनास ।वरिष्ठ लोक गायिका विमाकुमारी दुरालाई सम्मान गरिएको छ । अकला युवा क्लब रागिनासले एक भव्य समारोहका विचा उहाँलाई सम्मान गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज
राष्ट्रिय राजनितिको नयाँ परिवेशमा हाम्रो एकता अपरिहार्य : पौडेल
१९ असोज, भोटेवडार । नेपाली काँग्रेस लमजुङका सभापती भेषबहादुर पौडेलले पार्टीको सुन्दर भविष्य देख्न सवै कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस लमजुङ क्षेत्र नम्वर १ र २
पाचोकको फुर्जुङमा जुवातास र जाडरक्सि पूर्ण प्रतिवन्ध
१९ असोज । लमजुङको दोर्दी गाउपालिका वडा नंं ५ पाचाृेकको फुर्जुङमा स्थानिय युवाक्लव र आमा समूहको अगुवाईमा विकृति विसंगति विरुद्ध अभियान सुरु गरिएको छ । गाउमा जुवातास खेल्ने र जाडरक्सि
कुटपिटबाट स्वास्थ्य चौकी र बिद्युतका कर्मचारी गम्भिर घाइते
१९ असोज । बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. ४, पुरानोकोटको स्वास्थ्य चौकी र बिद्युतमा काम गर्ने कर्मचारीमाथी कुटपीट भएको छ । पुरानटकोट स्वास्थ्य चौकीका अहेब तेजबहादुर कुमाल र लमजुङ बिद्युत
एमाले लमजुङद्धारा संघ र प्रदेशका लागि २० जना उम्मेदवार तय
२० असोज, बेसीशहर । नेकपा एमाले लमजुङले संघीय सभा र प्रदेश सभाको लागि २० जना उम्मेदवार तय गरि प्रदेश कमिटिमा सुझाव पठाएको छ । एमाले केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई
प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागी राप्रपा लमजुङद्धारा उम्मेदवार सिफारिस, विवेकशील साझाले माग्यो उम्मेदवार
२० असोज, बेसीशहर । आगामी मंसिर १० गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लमजुङले उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ
जिप दुर्घट्नामा परी एक विदेशी पर्यटकको मृत्यु, ११ जना घाईते
लमजुङ, असोज २३ । बेसीशहर–चामे सडक अन्र्तगत मनाङको तालबजार नजिकै जीप दुर्घट्ना हुँदा एक विदेशी पर्यटकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आएका इजरायी नागरिक
प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागी राप्रपा प्रजातान्त्रीक लमजुङले गर्यो उम्मेदवार सिफारिस
२२ असोज, बेसीशहर । आगामी मंसिर १० मा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रीक लमजुङले पनि आफनो उम्मेदवारी सिफारिस गरेको छ । दलको बैठकले
मनाङमा पर्यटक बढे, होटल व्यवसायीहरुलाई भ्याइनभ्याइ
निरज अधिकारी- २२ असोज, मनाङ्ग । मनाङ्गको अपर पिसाङ्गका होटल व्यवसायी भुजुङ गुरुङलाई यतिवेला भ्याइनभ्याइ छ । मनाङ्ग घुम्न आउने पर्यटकको लर्को लागेपछि उनको दैनिकी आजकल
फरार २ अभियुक्त प्रहरी फन्दामा
२३ असोज, बेसीशहर । अदालतले कैद भुक्तानीको फैसला सुनाएपनि फरार २ अभियुक्त प्रहरी फन्दामा परेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै घरबाट पक्राउ गरिएको छ । सवारी ज्यान मुद्धामा २०७२ चैत १०
निरज अधिकारी- २८ असोज, लमजुङ । लमजुङको क्होलासोँथर गापा–८ घाम्राङका कृषक कुल प्रसाद गुरुङले किबी खेती शुरु गरेको ४ बर्ष बित्यो । वागवानी विकास आयोजना अन्तर्गत आव
ज्ञानसीपको अभावमा बिदेशीएका लमजुङेको मृत्युको दर बढ्दै / ३ महिनामै आयो २ शव
२८ असोज, बेसीशहर । लमजुङबाट वैदेशिक रोजगारीमा खाडीमुलुक गएकामध्येको वर्षेनी ठूलो संख्यामा मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ठूलै रहेपनि
लमजुङमा गुरुङ र घर्तीबीच प्रतिस्पर्धा हुने
५ कार्तिक, लमजुङ । साविक २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा संघीय संसदका लागि एउटा सिट मात्र छ । एक मात्र क्षेत्रमा वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ
पुष्प नर्सरीबाट रहरलाग्दो आम्दानी
पुष्प भन्दा बेर्नाको माग बढ्दो निरज अधिकारी- ५ कार्तिक, लमजुङ । लमजुङका एक महिला उद्यमी हुमा गुरुङ प्राय आफनै पुष्प नर्सरीमै भेटिन्छिन् ।
देउसीभैलोबाट उठेको रकम बालगृहमा
५ कार्तिक, बेसीशहर । वालवालिकाहरुले तिहारमा देउसी भैलो खेलेर जम्मा भएको रकम द्धन्दपिडित बालवालिकालाई दान गरेका छन् । बेसीशहर–२, भकुण्डेका वालवालिकाहरुले देउसीभैलो खेलेर जम्मा
दलहरुले गरे निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता
९ कार्तिक, बेसीशहर । लमजुङका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आसन्न प्रतिनिधी सभा र प्रदेशसभालाई मध्यनजर गरी
९ कार्तिक, बेसीशहर । मस्र्याङ्दी करिडोरमा निर्माण हुन लागेको २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनमा अवरोध गर्ने स्थानीयवासीले चेतावनी दिएका छन् । लमजुङको उदिपुरदेखि मनाङको तालसम्म निर्माण गर्न लागिएको २२०
ग्लोवल साकोसको ४४ करोड २५ लाखको कारोबार
९ कार्तिक, बेसीशहर । लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा रहेर वित्तिय कारोवार गर्दै आएको ग्लोवल वचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले ४४ करोड २५ लाख बढीको कारोबार गर्न सफल भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ४४ करोड २५ लाख
स्थापना दिवसको अवसरमा वालगृहलाई नगद सहित खाद्यन्न सहयोग
१० कार्तिक, बेसीशहर । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल तरुण दलको ६४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा तरुण दल लमजुङ क्षत्र नं. २ ले बेसीशहरमा रहेको बालगृहलाई खाद्यन्न सहयोग गरेको छ । तरुण दलले
जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा सञ्चालित २ दिने दन्त शिविरमा ३ सय ५५ जना लाभान्वित
१० कार्तिक, बेसीशहर । जिल्ला सामुदायिक अस्पताल बेशीसहरमा सञ्चालित २ दिने निशुल्क दन्तशिविरमा ३ सय ५५ जना लाभान्वित भएका छन् । एचडीसीएस जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको आयोजना र धुलिखेल अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा
लमजुङमा १० मतदान केन्द्र थप, आगामी निर्वाचनमा ९ हजार ४ सय ५७ मतदाता थपिए
१५ कार्तिक, बेसीशहर । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि लमजुङमा १० मतदान केन्द्र थप गरी १ सय ६५ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ
खुट्टामा गम्भीर चोट लागेका गुरुङ उपचारका लागी सहयोग खोज्दै
खुट्टामा गम्भीर चोट लागेका मस्र्याङ्दी गाउपालिका ४ काभ्रे रामबजारका मनिराज गुरुङको उपचारमा समस्या देखीएको छ । ५ बर्ष अघि खेतमा काम गरी घर फर्कने क्रममा बाटोमा लडी दाहिने खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको थियो
निरज अधिकारी १६ कार्तिक, बेसीशहर । लमजुङ प्रहरीले १७ किलो सुन सहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । हिमाली जिल्ला मनाङबाट सुनलाई झोलामा लिएर मोटरसाइकलमार्फत झर्दै गरेका एक
निरज अधिकारी १९ कार्तिक, लमजुङ । सार्क भिलेजको रुपमा परिचित लमजुङको घलेगाउँका बासिन्दा पर्यटन प्रबद्र्धन सँगै खेलकुदको प्रबद्र्धनमा समेत जुटेका छन् । गाउँमा सहयोग भित्रयाएर बास्केटबल,
पर्यटन प्रबद्र्धनका लागी बेसीशहरमा ४ ओटा पार्क बन्ने
निरज अधिकारी, बेसीशहर । लमजुङ सदरमुकाम समेत रहेको बेसीशहर नपाभित्र आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षीत गरी ४ ओटा पार्क निर्माण गरिने भइएको छ । नगरपालिकाका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरुलाई
शुरु भयो याक अट्याक, १० देशका ३१ जना सहभागी
१९ कार्तिक, बेसीशहर । विश्वकै उच्च हिमाली भेगमा आयोजना हुने साइकल दौड प्रतियोगिताको ११ औँ सस्करण आइतबाट शुरु भएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्र अन्तर्गत अन्नपूर्ण पदमार्गमा आयोजना गरीएको
साख जोगाउन वैकल्पीक पदमार्ग
निरज अधिकारी- २१ कार्तिक, बेसीशहर । विश्वविख्यात अन्नपुर्ण चक्रिय पदयात्रा साख जोगाउन लगि वैकल्पीक मार्गको शुरुवात गरिएको छ । हिमाली जिल्ला मनाङसम्म मोटरबाटो निर्माण
लागु औषध सहित तीन पक्राउ
२२ कार्तिक, बेसीशहर । लमजुङ प्रहरीले लागुऔषध सहित तिन जनालाई पक्राउ गरेको छ । सुन्दरवजार नपा –९, सिउँडीबारबाट एक भारतीय नागरिक सहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो
१ करोड २० लाख लागतमा ३ सय घरमा ‘एक धारा’
निरज अधिकारी ६ मंङ्सिर, बेसीशहर । यहाँको बेसीशहर नपा –२ भकुण्डेका प्रत्येक घरमा एक धारा जडान गरिने भएको छ । ‘एलडिएस्सी’ तथा च्वाईस नेपालको १
लमजुङमा मतदानका लागी १२ सय कर्मचारी खटिए
निरज अधिकारी- ६ मङ्सिर, बेसीशहर । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने पहाडी जिल्ला लमजुङमा आवश्यक निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी चुनावमा खटिएका छन् । मंसिर १० गते हुन लागेको
चुनाव अवधिभर मनाङमा आन्तरिक पर्यटक छिर्न रोक
दिउसो ३ बजेदेखि सवारी साधन मनाङ प्रवेश बन्द निरज अधिकारी- ६ मङ्सिर, लमजुङ । हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा निर्वाचन अवधिभर आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवेश गर्नमा रोक
मंसिर ७ गते राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु
पहिलो चरणमा मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावको मंसिर ७ गते बिहिबार अर्थात आज राति १२ बजेपछि चुनावको मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मौन अवधि
आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदा पनि निर्वाचन कार्यालय मौन
बेसीशहर, ९ मंसिर । मंसिर ७ गते राती १२ बजेदेखि मौन अवधी सुरु भएपनि जिल्लाका केही राजनितिक दलहरुले यसको धज्जी उँडाएका छन् । जिल्लामा बाम गठवन्धनका उम्मेदवारले हरुले निर्वाचन
ग्रामीण पर्यटनमा छलाङ मार्दै घलेगाउँ
निरज अधिकारी १२ मङ्सिर, घलेगाउँ । प्रदेश नं. ४ अन्तर्गत लमजुङको क्व्होलासोँथर गापा–३ मा पर्ने घलेगाउँ समुद्र सतहबाट २१ सय मिटर उचाईमा छ ।
एनआई सी एशियाको नयाँ शाखा बेसीशहरमा
१२ मंङसिर, बेसीशहर । एनआई सी एशिया बैंकको नयाँ शाखा लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा सुरु भएको छ । शाखा सञ्जाल, एटिएमसंख्या, पूँजी संरचना, वासलातको आकार, ग्राहक संख्याहरुको आधारमा एनआई सी एशिया
मत परिणाम कुर्दै नेता, विकास कुर्दै जनता
आइतवार सम्पन्न पहिलो चरणको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपेटीका सिलबन्दी गरेर बन्द कोठामा कैद गरिएको छ । मतपेटीका भित्र रहेका मतपत्रमा उम्मेदवारहरुको भविष्य पनि तालावन्दी गरेर राखिएको छ ।
२४ घण्टा मतपेटिका कुर्दै दलका प्रतिनिधि
गत आइतवार सम्पन्न चुनावका मतपेटिका कुर्न राजनीतिक दलहरुले कार्यतालिका बनाएका छन् । दलहरुले मतपेटिका सुरक्षाको लागि आआफ्ना टोली खटाएका छन् । प्राय महिलालाई दिउँसो र पुरुषलाई रातिमा
दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि राधीको साधारण सेयर आउने
राधी जलविद्युत कम्पनीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले निर्वाचनलगत्तै लमजुङमा सञ्चालित ४.४ मेगावाटको राधी
उम्मेदवारको ‘ढुकढुकी’ मतपेटिकाभित्र, अडकलबाजीमा दिन कटाउँदै मतदाता
निरज अधिकारी- १९ मंङसिर, बेसीशहर । लमजुङका ४ सय ९५ मत पेटिका जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा कडा सुरक्षामा राखिएको छ । यता उम्मेदवार र उनका समर्थक भने मतपेटिकाभित्र कसको मत कति छ ? कसले चुनाव
यो वर्षको नारायणगोपाल स्मृति सम्मान राष्ट्रकवि घिमिरे सहित १२ जनालाई प्रदान
यो वर्षको नारायणगोपाल स्मृति सम्मान राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेसहित १२ जनालाई प्रदान गरिएको छ । उहाँसँगै वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक सीके रसाइली, गीतकारहरु रत्नशमशेर थापा, कालीप्रसाद
लमजुङका ३ स्थानीय तहमा सिभिलको शाखा
२८ मंङसिर, लमजुङ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गको सभिल बैकको नयाँ शाखा यहाँका ३ स्थानीय तहमा विस्तार भएका छन् । जिल्लाको राइनास नपा सहित मस्र्याङदी गाउँपालिका र
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग लत्याउँदा बन्द न्यादी आयोजना सुचारु
२८ मंङसिर, लमजुङ । न्यादी जलविद्युत आयोजनाले मुख्य प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जायज मागलाई लत्याएपछि स्थानीयद्धारा बन्द गरिएको आयोजनाको काम बिहिबारबाट शुरु भएको छ । प्रभावित
सुन्तला उत्पादनमा बर्षेनी ‘भारी गिरावट’
निरज अधिकारी- २ पुस, उदिपुर । सुन्तलाको पकेट क्षेत्र भनेर चिनीने लमजुङको बेसीशहर नपा–१ उदिपुरमा यसबर्ष खासै सुन्तला उत्पादन भएन् । विगतका बर्षहरुमा व्यपारिहरुले
जलविद्युत मैत्री जिल्लाका १२ सय ५३ घरधुरी टुकीकै भरमा
निरज अधिकारी- २ पुस, बेसीशहर । जलविद्युत मैत्री जिल्लाका नागरिक अझै पनि टुकीकै भरमा छन् भन्दा अचम्म लाग्ला । तर, लमजुङका १२ सय ५३ घरधुरीका नागरिक अझै पनि टुकीकै भरमा
राधी विद्युतको साढे ७ लाख कित्ता आइपीओको बिक्री खुल्यो, कहाँ गर्ने आवेदन ? कस्तो छ कम्पनी ?
राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि साधारण सेयर (आइपीओ) को बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६४ हजार ५५० कित्ता आइपीओको
१४ पुष, लमजुङ । सार्क नमुना गाउँ घलेगाउँका विद्यार्थीहरुलाई खुत्रुके बितरण गरिएको छ । स्थानीय तिजे उत्तरकन्या कृषि सहकारी संस्थाले स्थानीय विद्यालयको विद्यार्थीहरुलाई खुत्रुके
२२ पुष, बेसीशहर । लमजुङमा जम्मा ६ जना उम्मेदवारले मात्रै चुनावको खर्च विवरण बुझाएका छन् । मंसिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा भएको खर्चको विवरण उम्मेदवारहरुले निर्वाचन कार्यालयमा
मिदिमखोला जलविद्युत : आयोजनाको दायित्वभन्दा बढी माग गरी आक्रमण
२६ पुस, डढुवा । जलविद्युत् आयोजनाले ‘समुदाय सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत गर्नुपर्ने योगदानभन्दा ४ गुणा बढी माग गरी ३ दशमलव ३ मेगावाटको मिदिमखोला जलविद्युत् आयोजना माथि आक्रमण भएको छ ।
लमजुङका २ स्थानमा जमिनबाट तातो बाफ निस्कन थालेपछि स्थानीय त्रसित
२६ पुष, बेसीशहर । लमजुङका २ स्थानमा अनावरत रुपमा जमिनबाट तातो बाफ निस्कन थालेपछि स्थानीयबासी बसित बनेका छन् । यहाँको सुन्दरबजार नपा –९ सिउँडीबारको बस्तीनजिकै जमिनबाट र दुधपोखरी गापा